နေအိမ် » လှုပ်ရှားမှု » ဒိုရာနဲ့ပျောက်ဆုံးချစ်သူများနေ့
ဖေါ်ပြချက်: ဒိုရာနဲ့ပျောက်ဆုံးချစ်သူများနှင့်အတူ Adventures ကို။ http://ofunnygames.com အပေါ်ဒီဂိမ်း Play
ကစား: 693,009 tag ကို: ဒိုရာ, ဒိုအားကစားပြိုင်ပွဲ
nobita ဆီးနှင်းစွန့်စားမှု vs doraemon
Nobita နှင်းစွန့်စားမှု vs Doraemon နှစ်ခုကစားသမားတွေဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်, သင်သည်သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူဆော့ကစားနိုင်ပါတယ်။ Doraemon နှင့် Nobita ပစ္စည်းများအားလုံးစုဆောင်းနဲ့ Snow Town မှလွတ်မြောက်ရန်ကူညီပါ။ ထောင်ချောက်, ရန်သူနှင့်တိရိစ္ဆာန်များနှင့်အတူသတိပြုပါ။ Nobita ရဲ့အိမ်ပြန်လာမှဒီဂိမ်းထဲမှာအားလုံးအဆင့်ဆင့်ဖြတ်သန်းရတယ်။
ဒိုရာနှင့်သစ်တောစွန့်စားမှု - ဒိုသစ်တောထဲကနေအိမ်ပြန်ရကိုကူညီပါ။ ခုန်ဘားရွှေ့နှင့်အာကာသမှခလုတ်များကို arrow ။ တတ်နိုင်သမျှအများအပြားစိန်စုဆောင်းပါ။ 8 အဆင့်နှင့်ပျော်စရာတွေအများကြီး။
run doraemon ပြေး 2
Run ကို Doraemon Run ကိုအကွာအဝေးအပြေးဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အဖြစ်ဝေးတတ်နိုင်သလောက်ပြေးခုန်ဖို့ Doraemon ကိုကူညီပါ။ သင်တတ်နိုင်သလောက်အများအပြားရမှတ်ဂိုးသွင်းဖို့ကြိုးစားအဖြစ်ဖွင့်အဆုံးမဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်။ အပိုမှတ်ရဖို့နဲ့ finish ကိုအမှတ် saf ရောက်ရှိရန်အသီးအသီးမိုင်မှာဘာဂါစုဆောင်း
ဒီဂိမ်းထဲမှာ, ဒိုကိုထူးဆန်းပွညျ၌ရှုံးနိမ့်သူကကျောင်းပြန်လာသောသူမ၏ခရီးပေါ်မှာရှိသမျှသောစိတ်နှလုံးကိုစုဆောင်းရမည်ဖြစ်သည်။ သူမ၏ခုန်ဖို့, ရွှေ့ဖို့ Space Bar ကိုမြှား key ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်အားလုံးအဆင့်ဆင့်အပြီးသတ်ကူညီပါ။
Nobita သူ့မိတ်ဆွေရှာပြီးအိမ်ပြန်ဖို့လာကိုကူညီပါ။ ခုန်ရန်, Space Bar ကိုရွှေ့ဖို့မြှား key ကိုသုံးပါ။
ဒိုရာသူမကောင်းကင်တမန်သည်င်နှင့်တစ်ဦးအတောင်တော်ရှိကြောင်းအိပ်မက်မက်။ သူမ၏ခုန်ဖို့, ရွှေ့ဖို့ Space Bar ကိုမြှား key ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်တစ်ဦးအတောင်ပံရှိသည်ဖို့အားလုံးအမွေးစုဆောင်းကိုကူညီပါ။
မှလွတ်မြောက်ရန်တစ်လမ်း doraemon ရှာတွေ့
Doraemon ဒီဂိမ်းထဲမှာအားလုံးအဆင့်ဆင့်လွန် homeand လာရန်အလမ်းကိုရှာဖွေကိုကူညီပါ။
Doraemon ကျောက်ခေတ်ခေတ်ကိုပြန်သွားဖို့အချိန်လည်းစက်ကိုအသုံးပြုသည်။ Doraemon နှင့် Nobita ကြောင့်ကျောက်ကိုအသက်အရွယ်ဘော်ရီဂျင်နီစိန်ခေါ်မှုဖို့အပြေးပြိုင်ပွဲပြီးအောင်ကူညီပေးပါ။
Doraemon နှင့်နက်ရှိုင်းသောပင်လယ်၌သူ၏မိတ်ဆွေများစွန့်စားမှု, သူတို့ကအပေါ်ပစ္စည်းများကိုစုဆောင်းအပေါင်းတို့နှင့်အတားအဆီးကိုဖကျြဆီးခွငျးအားဖွငျ့အားလုံးနဂါးကိုသတ်ပစ်ချင်တယ်။
Amazing မြေယာအတွက်ဒိုရာစွန့်စားမှု, သူမ၏နေအိမ်တွင်လာအပေါင်းတို့နှင့်မိကျောင်းသွားလမ်းကိုကူညီရှာဖွေ။
Dora ဖိနပ် collection များကို
ဒိုရာသူမ၏ဖက်ရှင်စုဆောင်းမှုအတွက်ပိုပြီးဖိနပ်ချင်သူလမ်းအတွက်ဖိနပ်စုဆောင်းကူညီခုန်ဖို့, ရွှေ့ဖို့ space bar ကိုမြှား key ကိုသုံးလော့။
ဒီခရစ်စမတ်မှာ, ဒိုရာအားလုံးအဆင့်ဆင့်လွန်နှင့်လမ်းအပေါ်ဆုကြေးဇူးကို boxs စုဆောင်းဖို့တစ်ဦးစွန့်စားမှုရှိသည်။
nobita ATV စွန့်စားမှု
Nobita ဒီဂိမ်း၏အားလုံးအဆင့်ဆင့်ဖြည့်စွက်အားမိမိ ATV နှင့်အတူစီးကိုကူညီပါ။
မြေကြီးတပြင်မှတပါး doraemon နှင့် nobita
Doraemon နှင့် Nobita သူတို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုကယ်တင်နိုင်ရန်အတွက်မြေကြီးတပြင်ပတ်ပတ်လည်သွားကြဖို့တာဝန်ပေးဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ သူတို့ကိုပျားကိုရှောင်ကြဉ်ကူညီခြင်းနှင့်အပေါငျးတို့အဆင့်ဆင့်ဖြည့်စွက်ဖို့ပန်းသီးကိုစုဆောင်းပါ။
ဟယ်လိုညဉ့်အခါ, Nobita ၏မိတ်ဆွေများတိုကျိုမြို့ရှိဖုတ်ကောင်များကဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ သငျသညျသူ့ကိုသူ၏မိတ်ဆွေများကယ်တင်ရန်နှင့်သင့်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရှိသမျှဖုတ်ကောင်အသွင်အပြင်ရိုက်ကူးကူညီပေးပါတယ်။
ဟယ်လိုဝင်းကိုညဉ့်, သရဲတစ္ဆေ, ဖရုံသီး၏ alot ရာသောဝိညာဉ်တော်မြို့မှာ Nobita စွန့်စားမှုအတွက် ... သူ့ကိုအားလုံးလင်းနို့ရိုက်ကူးနှင့်ပိုပြီးရမှတ်ရကိုကူညီပါ။ ဟယ်လိုဝင်းမင်္ဂလာ!
Dora ဟယ်လိုရဲတိုက် devils
အဟယ်လိုညဉ့်အခါ, ဒိုငျသညျဒိုဂိမ်းအားလုံးအဆင့်ဆင့်လွန်ကူညီဖရုံသီးစုဆောင်းဖို့တစ်ဦးတံမြက်စည်းကိုအသုံးပြု, သင်ကကောင်းတဲ့ဟယ်လိုညဉျ့အခါရှိသည်လိမ့်မယ်
ဒီ Doraemon စီးရီးဂိမ်းပျော်စရာဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ Nobita လေးသမားအားလုံး Doraemon baloons ရိုက်ကူးပျံသန်းအသုံးပြုကူညီပါ။
Nobita မိုဃ်းတိမ်ပေါ်ခုန်နှင့်တတ်နိုင်သမျှမြင့်မားရကိုကူညီပါ။ သင်ပျောက်ကွယ်သွားပါစေအသီးအသီးသောမိုဃ်းတိမ်နှုန်းမှတ်ရလိမ့်မယ်။ လေထုထဲတွင်နေထိုင်ရန် mouse ကိုခုန်များနှင့်ပြောင်းရွေ့ဖို့ကိုနှိပ်ပါ။
Doraemon နှင့် Nobita အလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သစ်တောထဲမှာပျောက်ဆုံးသွားရ, သငျသညျသူ့ကို Nobita ရှာပြီးလုံခြုံစိတ်ချစွာအိမ်ပြန်လာကိုကူညီပေးပါတယ်။
nobita, Suneo, Takeshi, Shizuka: တစ်နေ့မှာ Doraemon သည်မိမိအဆွေခင်ပွန်းနှင့်အတူတိုကျိုမြို့ပြတိုက်သွားရောက်။ သူ့ကိုလမ်းအပေါင်းတို့၌ပစ္စည်းများကိုစုဆောင်းအပေါင်းတို့နှင့်တကွအဆင့်ဆင့်အပြီးသတ်ကူညီပါ။
ဒိုဒီဂိမ်းထဲမှာ Wonderland ထဲမှာ Pony စီး, ဒိုတစ်ဦးကောင်းဘွိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ သူမ၏စီးနင်း Pony Diego မှကယ်တင်ရန်ကိုကူညီပါ။ ထိုလမ်းပေါ်တွင်အတားအဆီးသတိထားမိမှာ, ခုန်ဖို့အာကာသ bar ကိုနှိပ်ပါ။
ဒိုရာနဲ့ဖိနပ်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့စကိတ်စီးဒင်္ဂါးပြားကိုရှာဖွေနဲ့သူတို့ရဲ့ကြိတ်စက်ကစားစရာမိတ်ဆွေများဂိမ်းထဲမှာစကိတ် Park ကဝင်ရောက်ကူညီဖို့ကိုကူညီပါ။ ပျော်ရွှင်ပါစေ!
ဒိုကြီးတွေဘောလုံးဂိမ်းမှသူမ၏လမ်းပေါ်ရဲ့, ဒါပေမဲ့ Big ဖလားရနှင့်ဖလားအနိုင်ရရန်သင့်နည်းနည်းစူးစမ်းရှာဖွေသူထံမှအကူအညီလိုအပ်သည်!
Doraemon နှင့် Nobita ကမ္ဘာမြေပျက်စီးတန်ခိုးနှင့်စက်ရုပ်များကကျူးကျော်သည်အဘယ်မှာရှိအနာဂတျမှာ Adventures ရှိသည်။ Nobita နှင့် Doraemon မစ်ရှင်သူတို့ကိုဤမစ်ရှင်ပွီးမွောကျကကူညီခြင်း, စက်ရုပ်ရိုက်ကူးဖြင့်မြေကြီးကိုကယ်တင်ဖြစ်ပါတယ်ရှိသည်။